Hongu ndiri kurevesa. Ndakatanga basa rangu pawebhu anopfuura makumi maviri emakore apfuura. Saiti yangu yekutanga yaive saiti inonzi Kubatsira Ruoko iyo yakarongedza nzvimbo dzakanakisa kubva kutenderera padandemutande kubatsira vanhu nemakomputa avo uye nekufambisa zviwanikwa paInternet. Makore gare gare ndakatengesa dura kune kambani yakabatsira vanhu kurega kusvuta, imwe yekutanga yangu guru zvibvumirano.
Mushure mekuverenga Kukurukurirana Wakashama, Ini ndakakurudzirwa kuita zviri nani brand uye kudzora zvirimo pane ino saiti. Ini zvakare ndaida kumwe kutonga pamusoro pekutaridzika uye kunzwa kweblog rangu, saka ndakaenda kune yangu domain, dknewmedia.com, mu2006 uye ndakavaka yangu yekutanga WordPress saiti. Sezvo ini ndaive ndakanangana nekutengesa tekinoroji, ini ndanga ndisingade iyo domaini ine zita rangu kuti ipinde munzira, saka ndakafambisa saiti (zvinorwadza) kunzvimbo yayo nyowani muna2008 kwayakakura kubva ipapo.